SuperTuxKart inoburitsa yayo vhezheni 0.9.3 rc1 Hallowen Dzokorora | Linux Vakapindwa muropa
Super Tux Kart yakavhurwa sosi, multiplatform vhidhiyo mutambo uye zvachose yemahara, mutambo wakanyorwa muC ++ uye unoshandisa iko Antartica raibhurari, uyu mutambo inobuda seimwe nzira yeTuxKart, uko protagonist iri Linux Kernel mascot «Tux».
Unogona kusarudza pakati pemutambi mumwe, hwindo rakazara, maviri, matatu uye mana mutambi akapatsanura skrini. Pane sarudzo mbiri dzemitambo: nhangemutange imwe uye Grand Prix.
Pachiitiko ichi timu yekusimudzira iri kufara kuburitsa yako 0.9.3 rc1 vhezheni, yaakashandisa nayoChinhu chitsva ndechekuti yatove neiyo vhezheni yeApple uye kuti tinogona kuiwana kubva kuGoogle Store.
Iyi vhezheni nyowani inowedzera kune aripo, yakawedzera katarogu yemidziyo patinogona kunakidzwa nemutambo mukuru uyu wemujaho.
Kupiwa mazuva aakaburitswa iyi vhezheni Regedza Musarudzo inotora sezita rekodhi "Kuvandudza Hallowen".
Pindai izvo zvikuru zvitsva kubva SuperTuxKart Hallowen Gadziriso isu takawana:
Sezvazviri mune chero vhezheni nyowani isu tinowana bug fixes uye kugadzirisa mashandiro
Sezvo iyo nyowani yakataura kwavari!Tsigiro yeApple! kuti tinogona kuiwana kubva kuGoogle Play chitoro, kana kurodha apk kubva pawebhusaiti yavo.
Uyewo imba yekare yakagadzirwazve uye yakaita nhandare mbiri nyowani
Mateki matsva: Candela Guta, Las Dunas Nhandare, Cornfield Kuyambuka
Karts ikozvino ine mwenje mwenje unovheneka otomatiki husiku.
Yakavakirwa-mukati rekodhi rekodhi.
HSV colorization yemamwe matunhu.
Chipo chitsva chepakeji kunyanya yeHalloween
Chii chingave cheHalloween pasina manhanga uye imba inokatyamadza?
Imba yekare yakagadziriswazve uye nhandare mbiri nyowani dzakagadzirwa kunyanya kugadziridza uku.
Iyo saiti yepaki yakasiyiwa yekuvaraidza, jecha iri raizotyisa roga pacharo. Asi nekuda kwekunakidzwa chaiko, tamba mashoma marongero ehondo modhi pano uye uwane tsananguro nyowani yekunakidza seshamwari dzako (kana AI karts) dzinobuda mumakona.
Pasina imwezve ado, zvinongoramba zvichikwanisa kunakidzwa nemutambo mukuru uyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » SuperTuxKart inoburitsa yayo vhezheni 0.9.3 rc1 Hallowen Kwidziridzo
Izvo hazvina kunyanya kuoma kuwedzera blender karts pane iyo PC ... ini ndakasanganisira zvimwe zvandaive nazvo kubva kuTente 3D
Acumos chirongwa chekunyepedzera cheLinux Foundation